Specialized Conveyor Rollers Vagadziri Uye Mutengesi muChina - GCS
GCS inodada kuve mumwe wevagadziri vepamusoro vanotakura zvinhu uye vatengesi vekutengesa muChina
Rollers ndeimwe yeanonyanya kushandiswa uye panguva imwe chete chimwe chezvakanyanya kukosha zvemutakuri wekutakura system, uye isu tiriakanakisa anogadzira zvinhu zvinotakura zvinhu muChina.Kwemakore makumi maviri nemanomwe apfuura, tanga tichigadzira ma roller uye maconveyor ezvimwe zvemhando yepamusoro pasi rose.Isu takabatsira makambani makuru nemadiki kuti azvisimudzire nenzira ine simba kuburikidza nesimba redu (GCS) rekutakura zvinhu fekitori uye mutengesi roller.Isu tinodzora kunaka kwezvigadzirwa zvedu nekushandisa epoxy pendi yemhando yepamusoro kupenda pamusoro pema roller uye nekushandisa kushomeka kwekushivirira kukosha.
Makore edu eruzivo rwekugadzira anotibvumira kubata zviri nyore iyo yese kugadzirwa kwekutengesa cheni, inova mukana wedu wakasarudzika seyakanakisa conveyor ekugadzira zvigadzirwa uye vimbiso yakasimba yekuti isu tinopa maholesese ekugadzira masevhisi kune ese marudzi emaroller.
Chikwata chedu chine ruzivo chemamaneja eakaundi uye vanachipangamazano vanokutsigira mukugadzira mhando yako - ingave yemarasha anotakura marasha - ma roller emagetsi ekugadzira magetsi, kana akati wandei ezvigadzirwa zvemaroller zvekushandisa munzvimbo dzakatarwa - zvinobatsira pakushambadzira brand yako mukufambisa. industry.Tine boka revanhu vanga vachishanda muindasitiri yekufambisa kwemakore akawanda, vese (vatengesi vekutengesa, mainjiniya, maneja emhando) vane angangoita makore masere echiitiko.Isu tine hushoma hushoma hwekuodha huwandu, asi tinogona kuburitsa hombe yeodha yakawanda munguva pfupi pfupi.Tanga chirongwa chako nhasi, taura nesu, taura nesu online kana kufona +8618948254481/+8615986956123
Isu tiri mugadziri, uchitigonesa kukupa iwe mitengo yakanakisa tichipa yakanakisa sevhisi.
Iwo embossing rollers anoshandiswa pachiedza PVC ari fr...
Gravity rollerPU sleeve simbi rollers
Inotakurika Belt Conveyor System
Chiedza bhandi conveyor mugadziri kubva kuChina GCS
Chikafu giredhi plus Stainless simbi furemu conveyor
Bhandi conveyor ine Skirt Incline
Mini Portable Belt Conveyor dhizaini
90 dhigirii PVC bhandi conveyor
Mugero wePVC Belt Conveyor Dhizaini
PVC bhandi flat conveyor dhizaini
Adjustment Friction roller Trough uye dzoka ne...
Silicone rabha rollers inoshandiswa mune akasiyana mac ...
Inotungamira mugadziri uye mutengesi wekutengesa weanorema duty conveyor rollers / light duty gravity conveyor
Somutungamiririnorema basa / chiedza basa conveyor zvekushandisa mugadziriuye mutengesi wekutengesa, tine makore makumi maviri nemanomwe echiitiko mukugadzira zvinhu zvekutakura, zvigadzirwa zvikuru uye nezvimwe.Makore echiitiko akaita yeduconveyor roller wholesalebhizinesi rekupa cheni yakakura kwazvo.
Seyakanakisa branded yakawandaconveyor zvinhu mugadziri uye mutengesi, tinogamuchira maOEM neODM masevhisi, titumire dhizaini yako uye isu tinokwanisa kuita sampuli chaiyo mukati memazuva gumi kudhinda mhando yako pane zvigadzirwa uye kurongedza.Hazvina mhosva kuti uri mutengesi kana muridzi wemhando, isu tichakubatsira iwe kusimudzira bhizinesi rako nekukurumidza nemhando yepamusoro zvigadzirwa uye sevhisi yakakwana.
Kana uchida kutangacustomizingzvigadzirwa zvako kuti zvienderane nenyika yako, ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu Kupa emhando yepamusoro sevhisi yevatengi uye personalization ndiyo yedu yekusingaperi yekutsvaga!
Kupfuura makore 27 ehunyanzvi
Neanopfuura makore gumi nemashanu ehunyanzvi mukushanda nemakambani uye zvigadzirwa muindastiri yekufambisa, zvigadzirwa zvedu zvema roller zvinopa vatinodyidzana navo mazano matsva ekuvandudza mashandiro avo nekushanda kwavo munzvimbo yebasa.
Zvishandiso zvinopihwa nevatengesi venguva dzose.100% yemhando yekutonga kwezvinhu zvakasvibirira inoitwa.Ese maconveyor roller anogadzirwa neakasiyana bvunzo uye batch otomatiki muchina kudzikisa kukanganisa kwemanyorero maitiro.Kuti ive nechokwadi chemhando yepamusoro, chigadzirwa chega chega chinofanirwa kutarisisa uye kupihwa chitupa chekugadzira chisati chagadzirira kutumirwa.
Kukwanisa kwefekitari uye mutengo wemakwikwi
Isu tiri tsime fekitari.Tinogona kupa mutengo wakanakisisa.150 vashandi vakanyatsodzidziswa vane makore anopfuura 27 ane ruzivo muindasitiri, uye isu tinogona kupa yakagadzikana kugadzirwa kwesimba.
Global Conveyor Supplies Company Limited (GCS) Yakabatanidzwa muChina 1995) ndiyo ine mazita e“GCS” ne“RKM” uye ndeye E&W Engineering SDN BHD.(Yakabatanidzwa muMalaysia muna 1974).
Iyo Cement Indasitiri
Port terminal kushanda
Nyaya yejecha nematombo ekufambisa hurongwa
Case study yefekitari yematehwe isina kutyaira
PVC bhandi conveyoer
Kuronga conveyor system